System, rebirth, reborn ,timetravel and transmigration 🖤 - Gentle_Little_Bunny - Wattpad
System, rebirth, reborn ,timetravel and transmigration 🖤
လက်စားချေခြင်းနှင့် အချစ်စစ် System
Owncreation boy love system fiction Start Date 3.1.2021 On going.
ပွနျလညျမှေးဖှားလာသော ဗီလိနျရဲ့ရညျးစားဟောငျး (Myanmar translation)
124K 24.9K 49
This novel is not mine. Myanmar(Burmese) Fan Translation of The Villain's Reborn Ex-girlfriend Unicode +Zawgyi Status in COO - 62 Chapter (Complete) Author - 桃花引 Eng Translator - FAERY Translation
Rebirth asaPlayboy
89.2K 18.3K 37
ပိုင်လင်းရန်က တောက်ဓမ္မကျင့်ကြံသူတစ်ယောက်ပဲ သူကျင့်ကြံတဲ့လမ်းစဉ်ဟာ ကိလေသာတရားကင်းရှင်းရတယ် ဒါပေမယ့် သူဟာမတော်တဆသေဆုံးခဲ့ပြီး ခေတ်သစ်မှာပြန်လည်နိုးထလာတယ် စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာကတော့ သူ့ဝိဥာဉ်ဝင်ရောက်သွားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်က playboy တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့တာပဲ ပိုငျလငျးရနျက တောကျဓမ်မကငျြ့ကွံသူတဈယောကျပဲ သူကငျြ့ကွံတဲ့လမျးစဉျဟာ က...
Save the villain (System)
693K 94.5K 111
ငါသသှေားခဲ့တယျ ကိတျမုနျ့နငျပွီးတော့ အငျး နညျးနညျးတော့လူကွားမကောငျးပမေယျ့ မွအေောကျလောကရဲ့အရှငျသခငျငါဟာ ကိတျမုနျ့တဈခုကွောငျ့သဆေုံးခဲ့တယျ နပေါဦး ငါ့အနားက အမညျးရောငျအလုံးလေးကဘာလဲ ငါသေသွားခဲ့တယ် ကိတ်မုန့်နင်ပြီးတော့ အင်း နည်းနည်းတော့လူကြားမကောင်းပေမယ့် မြေအောက်လောကရဲ့အရှင်သခင်ငါဟာ ကိတ်မုန့်တစ်ခုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တယ် နေပါဦး...
Virus System [ Completed ]
3.6M 431K 211
Start date - 17 Aug 2019 End date - 18 Nov 2020 Wherever you go I'll always be there. [ Both Zawgyi and Unicode ]
ကျွန်တော်သည် သူ့ရဲ့မိန်းမ ကြှနျတျောသညျ သူရဲ့မိနျးမ
1.2M 145K 96
重生成为情敌妻 - Shu Hua (舒怀) (translation) intetnet မှာခေတ်စားနေတဲ့ post: မင်းနိုးလာလို့ gender ပြောင်းသွားရင် ဘာလုပ်မလဲ? ဆုကျန်း ဒီpostဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်တယ်။ 'မဖြစ်နိုင်တာ' နောက်တော့ သူပြောင်ခဲ့မိလို့ နောင်တရလာပြီ။ WTF!!! ငါ့ဥ ငါ့ဥ!!! OH NO!!!!! Internet မှာခတျေစားနတေဲ့ post: မငျးနိုးလာလို့gender​ပွောငျးသှားရငျ ဘာလုပျမလဲ? ဆ...
When I Reach The System [mission -2](Z&U)completed
47.9K 4.7K 28
"အား....ငါ့ကိုမိန်းက​လေးဘဝနဲ့မ​နေခိုင်း​တော့ဘူး​လား ငလsystem​ရေ.." "အယ်​...အဲ့တာကျွန်​​တော့ကိုမဆဲနဲ့ system worldရဲ့အကြီးအကဲကိုပဲဆဲ တာဝန်​​တွေအကုန်​လုံးသူပဲချ​ပေးတာ ကျွန်​​တော်​ကသူချ​ပေးတဲ့တာဝန်​ကိုhostနဲ့တူတူ​ဆောင်​ရွက်​ရုံပဲ" Both unicode & zawgyi
Their Eternal Love (Arc4Xian Shi ဘဝ)
157K 7.6K 20
လငျးရှီဟာ ၂၁ရာစုက ဒီဇိုငျးနာတဈယောကျ.... Accident ကွောငျ့ မသဆေုံးခငျမှာ sexy ကကြ ခြောမောတဲ့ ယောကျြားကိုစှဲလမျးသှားခဲ့တယျ။ သူ့ရဲ့ဝိဉာဉျဟာ System 1314 နဲ့တှပွေီ့း ခြောမောတဲ့ ယောကျြားတှကေိုတှဆေုံ့ဖို့ အကွောငျးဖနျလာတဲ့အခါ...... This story is inspired by Quickly Wear The Face of Devil.(QWTFOD) I'm not original writer and...
628K 128K 116
Eng Title _ Villain,please go easy on me Burmese Title _ ဗီလိနျကွီး​ရေ​ကြေးဇူးပွုပွီးငါ​လေးကိုညှာတာ​ပေးပါ!! [ဗီလိန်ကြီး​ရေ​ကျေးဇူးပြုပြီးငါ​လေးကိုညှာတာ​ပေးပါ!!] Status in COO - 2560 chapters Original Author _ A complex of dirty and Naïve Eng translator _ Guy Gone Bad Myanmar Translator _ Ichika Yuko #I don't own this...
နတျဆိုးသခငျနှငျ့ သူတျောစငျ(QWFOD Extra2)( myanmar traslation)
420K 44.8K 46
The Monk and Master of Demonic mm translation Eng translation link https://chrysanthemumgarden.com/novel-tl/fod2/
ဗီလိနျခဈြသူ (Arc_8,10,15,Extra_1,2,4) (MM Translation)
462K 44.6K 121
Arc _ 8, 10, 15 Extra_ 1,2,4 Total _6Arcs Title: Quickly Wear the Face of the Devil အကျဉ်းချုပ် - ထိပ်တန်းဟက်ကာတစ်ယောက်ကိုဘဝများစွာပြန်လည်မွေးဖွားဖို့ Lod God System ကရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးအဆုံးသတ်သွားတော့ အရာအားလုံးက ပျက်စီးသွားပြီး ဝမ်းနည်းစရာတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး ကျိုးယွင်ရှန့် သည်ဗီလိန်စနစ်၏ ထိန်းချုပ်မှုမ...
System:Rebirth of Xiao linn laung
350K 27.1K 136
Author -Elizabeth chi Type-System လင်းလျောင်တစ်ယောက်ယောက်ျားမယူချင်လို့ထွက်ပြေးရင်း Systemနဲ့ချိတ်မိပြီးဘယ်လိုတွေကမောက်ကမဖြစ်ကြမလဲ oocဖြစ်နေတဲ့world မှာ..godရဲ့ပရောပရည်လုပ်မှုတွေနဲ့ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမလဲ
သစ်စာဖောကျခံရတဲ့ ဧကရာဇျ (သစ္စုာဖောက်ခံရတဲ့ ဧကရာဇ် )
631K 69.3K 52
ကျိုးယွင်ရှန့် + ဒယ်ဒီ
ကံကြမ္မာ၏ သမီးပျို ( ဘာသာပြန်)
253K 44.2K 57
Book 1+ Book 2
𝚆𝚒𝚜𝚑 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚂𝚢𝚜𝚝𝚎𝚖 (𝙲𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎𝚝𝚎𝚍)
429K 59K 137
Uni စိတျသဘောကောငျးတဲ့ကောငျလေးတဈယောကျဟာ ဖူးစာရေးနတျမငျးနဲ့ စာခြုပျခြုပျမိပွီး ဘဝမြားစှာမှာဝငျစားရငျး ဖူးစာကွိုးနီတှကေို ပွနျတညျ့ပေးရတဲ့အခါ.... Pls vote me if you like the story because votes are power that can push me to write the story. Cover By Di Di Zawgyi စိတ်သဘောကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ ဖူးစာရေးနတ်မင်းနဲ့ စာခ...
905K 133K 107
ဘာသာပြန်ဝတ္ထုပါ။ [Zawgyi + Unicode] ___ အမျိုးသမီးဇာတ်ရံအဖြစ် သူမ ဝတ္ထုတစ်အုပ်ထဲ ရောက်သွားခဲ့တယ်။ အဓိကဇာတ်လိုက်မင်းသားကို တစ်ဖက်သတ်စွဲမက်နေခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကောင်ပေါ့။ သူမမှာ သူ့လက်ကိုတောင် ဆုပ်ကိုင်ခွင့်မရလိုက်ဘဲ အရှင်လတ်လတ်ရိုက်သတ်ခံရမယ့် ကြမ္မာရှိနေတယ်လား...? အရေးကြီးတာ အရင်လုပ်ရမယ်... အရင်ဆုံး သူမ ရှင်သန်ဖို့လိုတယ်။ ရှင်...
74.3K 7.1K 32
This is myanmar translation. Not my own story. Eng Title-Its Not Easy Being your love ravil's Big Brother (Completed) Chinese Title- 情敌他哥不好当 Rating-4.2/5.0 Author-精分柚子茶 Eng Translator-Mosstree Gender-Yaoi, bl, comedy, romance, reborn Preview ............. အသက် ၂၇နှစ် အရွယ် ဝေဟန်က နည်းနည်းဝတယ်၊ သတ္တိ...
Stay With Me [ Completed ]
383K 56K 45
Start date - 31 May 2020 End date - 22 Dec 2020 Wang Yibo Xiao Zhan [ Both Zawgyi and Unicode ]
52.6K 5.5K 20
3.1M 354K 55
၁၆၃၅ ဆိုတာ ညောငျရမျးခတျေထဲက မလား။၁၆၃၅ ဆိုပွီး ငါက ဘယျခတျေကို ရောကျနတောတုနျး. #ဤဇာတျလမျးတှငျပါဝငျသောအကွောငျးအရာမြားသညျ သမိုငျးနှငျ့မသကျဆိုငျပါဘဲ စာရေးသူ၏ဖနျတီးစိတျကူးမှု သကျသကျသာ ဖွဈပါသညျ။ Book Cover_ Lucy Xellies Written in Myanmar Language.~
257K 49.6K 101
ဝတ္ထုပေါင်း ဇာတ်​လမ်းပေါင်း မြောက်​များစွာကနေ ဖြစ်​ပေါ်လာတဲ့ လောကတွေ ကမ္ဘာတွေဆီကို သွားလို့ရတယ်​လို့ စိတ်​ကူးကြည့်​ပါလား။ သင်​သာဆိုရင်​ ဘယ်​ဇာတ်​ရုပ်​ကနေ နေမယ်​လို့ စိတ်​ကူးရှိပါသလဲ။ လျှမ်းလျှမ်းတောက်​နေမယ့်​ ဇာတ်​လိုက်​ဖြစ်​ချင်​ပါသလား။ လူကောင်းလုပ်​မလား၊ လူဆိုးလုပ်​မလား။ ဒါမှမဟုတ်​ ဇာတ်​လိုက်​ရဲ့ နောက်​ကနေ ပံ့ပ...
603K 66.8K 109
#Start date : 13.2.2020 #End date : 18.5.2020 တစ်နှစ်အတွက် သူတို့ သဘောတူခဲ့ကြတယ်။ သူမက သူ့အတွက် အလုပ်ကြိုးစားပေးတယ်။ သူမရဲ့ အင်အားတွေကို သူနဲ့သူ့လူတွေအတွက် ကူညီဖို့ ပေးအပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဒုတိယဘဝမှာ သူမ လိုချင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု 'ငြိမ်းချမ်းခြင်း' ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်, သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကတိပြုခဲ့သည်။ ခင်ပွန်းသည်န...
OH MY GOD ! I'M IN NOVEL [ Completed ]
820K 102K 52
Start Date - 12 Nov 2019 End Date -5May 2020 Wang Yibo Xiao Zhan [ Both Zawgyi and Unicode ]
125K 7.2K 24
ယခုခေတ်က မိဘမဲ့ကောင်လေး၁ယောက် လုပ်ကြံခံရရင်း မတော်တဆအချိန်ကူးပြောင်းသွားသောအခါ ~~ မွေးကထဲကဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နေခဲ့ပေမယ့် ဘယ်သူ့ကိုမှစိတ်မပူတက်တဲ့ ဘုရင်က ဘာမဟုတ်တဲ့ ကောင်လေး၁ယောက်အတွက် အမြဲစိတ်ပူနေရသောအခါ ~~~ Own Fiction ယခုခတျေက မိဘမဲ့ကောငျလေး၁ယောကျ လုပျကွံခံရရငျး မတျောတဆအခြိနျကူးပွောငျးသှားသောအခါ ~~...
၂၀ရာစုတှငျ ပွနျလညျမှေးဖှားခွငျး( Rebirth In 20 Century )
2M 268K 61
"ကြှနျတျော အခုဘယျရောကျနတောလဲ?" ရနေံခြေးဝနတေဲ့ ပဉျြထောငျအိမျကွီးထဲမှာ မီးအိမျက အလငျးတဈခုပဲ ဖွာကနြတေယျ။ရဒေီယိုလို့ ယူဆရတဲ့ လေးထောငျ့ဆနျဆနျ အရာဝတ်ထုလေးထံက ပြံ့လှငျ့လာတာ က သူနဲ့ အတျောလေးမရငျးနှီးလှတဲ့ ၂ဝရာစုလောကျက မွနျမာသံစဉျတှေ။ ဘေးအခနျးနံရံမှာ ကပျထားတဲ့ ပွက်ခဒိနျကို အကွညျ့ရောကျတော့ သူအံ့သွလှနျးလို့ အသကျရှုဖို့တောငျမေ့...
I'll Be There In 1945... [completed]
109K 9.8K 44
part 19 (Uni+Zaw) လွတ်လပ်ရေးမရခင်ဂျပန်-အင်္ဂလိပ်ခေတ် ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့ကောင်လေး...... နေကြာပန်းတေကြွေတဲ့အခါ ခင်များဘယ်မှာရှိနေမှာလဲ I'LL B-E T-H-E-R-E 🌻 (unicode) လှတျလပျရေးမရခငျဂပြနျ-အင်ျဂလိပျခတျေ ကိုပွနျရောကျသှားတဲ့ကောငျလေး...... နကွောပနျးတကွှေတေဲ့အခါ ခငျမြားဘယျမှာရှိနမှောလဲ I'LL B-E T-H-E-R-E 🌻
The Villain Has Something to Say || ဘာသာပွနျ
172K 27.7K 33
Author 莫晨欢 : 反派有话说 [重生] Status in COO : 150 chps + 14 extras [original ver.] Year : 2016 * This is justafun translation work *
Love Him Till Eternity ( Myanmar Translation )
14.5K 1.5K 8
Love Him Till Eternity Original Author-hydrazona Cover -BlessedWolf Full Credit to original author.I own nothing,I'm just translation it 'cause I love it. 6.12.2018
ချစ်သူနှင့် စီးချင်းထိုးခဲ့သော တစ်ထောင့်တစ်ည တိုက်ပွဲများ ( Completed)
1.4M 117K 48
အရင်ဘဝဟောင်းမှာလည်း သူ့နာမည်က ရှင်းညီ အသက် ၃၀ အရွယ်မှာ အက်စီးဒင့် တစ်ခုကြောင့် သေဆုံးသွားပြီး တစ်ခြားလူတစ်ယောက်ဆီမှာ ပြန်နိုးထလာတယ် သူနိုးထလာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်ကလည်း ရှင်းညီဘဲ ၊ ဒါပေမယ့် အသက် ၂၂ ဘဲရှိသေးတဲ့ ဘဝမှာ ရည်မှန်းချက်တောင် မရှိတဲ့ကောင်လေး တစ်ယောက် ၊ အဲ့ဒီဘဝမှာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်
717K 115K 64
'သောက်ကျိုးတွေ ချီးလိုနည်း!! ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ ကိုယ့်ဇာတ်ကောင်...တစ်နည်းအားဖြင့် ငါ့သားက ငါ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာ ယောင်လို့တောင်မတွေးမိဘူး!! ဒင်းကဘယ်တုန်းက ကွေးသွားတာတုန်း!! နောက်ပြီးတော့ ဟောဒီကမင်းဖေဖေငါက gayမဟုတ်ဘူးကွ!!' Artist : Lucy Xellies